PDF dia tsy azo antoka | Avy amin'ny Linux
Tsy azo antoka ny antontan-taratasy PDF
Amin'ny ady mitandrina ny fitaovan'ny solosaina ho madio sy azo antoka, ny fandrahonana sy ny marefo dia mihamaro amin'ny hafainganam-pandeha tsy mampino. Ny zavatra tsy nampidi-doza teo aloha dia lasa fitaovana tsara indrindra ho an'ireo izay mamorona rindrambaiko manimba sy mitady tombony amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Iray amin'ireo zavatra ireo ny antontan-taratasy amin'ny endrika PDF. Araka ny fanadihadiana nataon'ny orinasa ScanSafe, valopolo isan-jato amin'ireo fahalemena voamarina tamin'ny taon-dasa dia misy ifandraisany amin'ny Antontan-taratasy PDF izay misy code sanatria.
Lasa ny andron'ny antivirus tsotra sy ny fanavaozana kely. Ny lozisialy maloto dia nanjary legiona tsy manam-petra izay mitombo sy miovaova isan'andro, mitady fomba vaovao hialana amin'ireo rafitra fiarovana, hitrandrahana ireo marefo ary hahatratra ny solosainantsika amin'ny farany. Ny Internet no elanelana fidirana voalohany amin'ireo bibikely ireo hatrizay, ka fiarovana mafy amin'ny resaka antivirus sy firewall no ilaina. Ny rohy malemy indrindra mijanona ho mpampiasa, fa indraindray ny rindrambaiko no diso. ny antontan-taratasy amin'ny endrika PDF Tokony tsy hampaninona azy ireo tanteraka izy ireo, saingy noho ny lesoka ara-piarovana amin'ny mpamaky azy efa tsy tonga lafatra dia lasa iray amin'ireo fitaovana safidy ho an'ireo mpamorona malware izy ireo. Araka ny tatitra natolotry ny orinasa ScanSafe (Sampana Cisco), valopolo isan-jato amin'ireo fahalemena hita nandritra ny taona 2009 dia misy ifandraisany amin'ny sasany PDF rakitra izay tao code sanatria, mikatsaka ny hanararaotra ny sasany amin'ireo lesoka amin'ny fiarovana izay lozisialy Adobe (manokana kokoa, ny Reader sy Acrobat) nijaly.
Tsy ratsy ny manadihady fomba hafa amin'ny mpamaky PDF. Amin'ny sehatra Windows, Foxit Reader dia iray amin'ireo soso-kevitra indrindra, fa SumatraPDF Izy io dia nitombo be tato ho ato, ary maivana toy ny taloha ihany.
'DjVu', dia teknolojia famoretana sary izay tonga mba hanome valiny mifanaraka amin'ny takian'ny fampandrosoana ny tranonkala ho an'ny atiny misy sary avo lenta, sary, ary nomerika ny antontan-taratasy amin'ny ankapobeny.
Manana ho an'ny tranga sasany ny tahan'ny famatrarana 5 ka hatramin'ny 10 avo kokoa noho ny fomba hafa ('jpeg' ohatra), ary ny fiasana amin'ny sosona dia mahatonga azy io ho tonga lafatra indrindra amin'ny fampidirana anaty fivoaran'ny tranonkala. Namboarin'ny AT&T hatramin'ny 1996 (pitsopitsony ara-teknika).
Noho ny toetra mampiavaka azy izay manome sehatra fampiasana betsaka azy, 'DjVu' no endrika famoahana izay mety hisolo, amin'ny fenitra vaovao, ny 'PDF' malaza kokoa.
Raha tena tsara i 'DjVu' ... ahoana no tsy ahalalako azy ...?
ve mafy manamarina ny antony tsy fisian'ny fanaparitahana ireo safidy tsara misy ao anatin'ny Free Software (ho mpifaninana amin'ny rindrambaiko manana, na -inclusive-, ao anatin'ny safidy malalaka maro), hahafahanao mamela ny fisainanao hitifitra ary misafidy izay tianao indrindra -tsy an-dàlana, hatramin'ny andro vitsivitsy lasa izay dia tsy dia fantatro loatra izy, efa henoko ny anarany fa tsy tadidiko hoe inona no toe-javatra ... -. Satria tsy izany ny teboka, ary raha fintinina dia andao lazaina fa be dia be ny fitaovana tsara sy tena tsara ka sarotra ny afaka manarona / mahalala ny zava-drehetra. Fa, raha mamaky an'ity ianao, ny fanazavana diso Amin'ity lafiny ity, antenainay fa resy izy io, na manentana anao - farafaharatsiny- hikatsaka valiny tsara kokoa.
Mikasika ny fahombiazan'ny 'DjVu', azonao atao ny miditra amin'ny fampitahana fampahalalana izay tsara kokoa hatrany raha manana hevitra marina, ho izay ny refy izay mahafaly ny mpahay siansa amin'ny informatika. Ho ahy, amin'ny fikarohana fotsiny nihena be ny haben'ny rakitraary kalitao mifandraika amin'ny endrika PDF voatazona (iray amin'ireo mety hisolo), dia efa manan-kery ho safidy io. Ankoatr'izay, raha mamaky ny fampitahana ianao dia efa fantatrao fa tsy ny soatoavina ihany no voatazona fa tsara kokoa ...
Tonga amin'ny ampahany tsara indrindra izahay, ary eo no mipoitra ny zava-miafina: Ahoana ny fomba fampiharana ny DjVu amin'ny solosainantsika! Eto indrisy dia tsy maintsy manao fizarazarana isika: mpampiasa / mpampiasa maimaim-poana ambanin'ny MS-Windows.
Raha anisan'ireo voalohany ianao dia mampiasa 'GNU / Linux', azonao atao ny misafidy ny variant 'DjVuLibre' -GPL ho an'ny format 'DjVu'-, izay manangona sy mametaka tsy ireo fitaovana ilaina hiasa aminy ihany, fa koa plug-in ho an'ny mpizaha. Tsara ny mahatadidy fa nandinika ireo fonosanao manokana avy hatrany ianao (ny sasany azo tsidihina amin'ny pejy fisintomana), ary raha tsy hitanao izy ireo dia ampidino ny kaody loharano (raha mijery ireo fiankinan-doha ianao dia tsy be loatra) .
Na dia te hanana fotsiny aza ianao fidirana amin'ity karazana rakitra ity dia tsy maintsy apetrakao koa ilay fonosana teo aloha, satria manana mpijery izy (somary Spartan fa miasa be), ary io no manome ny plug-in ho an'ny mpizaha.
Ho an'ny mpampiasa MS-Windows, ny safidy tsotra indrindra dia apetraka ny plug-in hahafahanao mamaky ny mpamaky 'DjVu' ao anaty browser, amin'izay afaka miditra amin'ny famakiana an'ity karazana rakitra ity (*). (Mazava ho azy MAC-Os X manana ny dikanteniny koa).
Raha te hiteraka azy ireo ianao na hifindra endrika hafa, misy fitaovana sasany ao amin'ny tranonkala ofisialy, saingy tsy afaka nanombatombana azy ireo aho. (Tongasoa ireo fanamarihana miaraka amin'ny zavatra niainanao.)
Araka ny nolazaiko teo aloha, Ao amin'ny Free Software dia misy safidy maro ... ary mandehana any amin'ny "sisin'ny" endri-javatra sy ny teknolojia vaovao, mampihatra azy ireo ao a "Incremental" mahazatra ... Eny, raha mampiasa ianao Gnome, mety efa anananao mpamaky 'DjVu': 'evince' Anisan'ireo kalitaony atolony ho toetra mampiavaka ny mpamaky djvu. Raha eo amin'ny tontolo iray ianao KDE, ary raha tsy te hiandry ianao mandra-pahatongan'izany 'KDE-4', hanampy anao ny etsy ambony. Raha tsy izany, 'okular' nantsoina ho mpitantana antontan-taratasy manerantany ho an'ny KDE, ary izany dia mitaky ny tontolo iainana teo aloha, no safidy.
Farany, tsy latsa-danja ihany koa ny fahafahan'ny olona ao amin'ny 'djvuzone.org' manolo-tena hampiasa mpanova antontan-taratasy an-tserasera: 'Any2DjVu'
Araka ny hitanao, tsy misy betsaka "Ny ara-teknika" izay azoko lazaina manokana ... raha manana ireo olana ireo ianao dia afaka foana mitodiha any amin'ny loharano. Ny fanomezana hevitra momba ity teknolojia famoretana sary ity dia noho ny kalitaony dia eo an-dalam-pandrosoana (ny fanontaniana dia: Ahoana no mbola tsy nahavitanao azy ...?), ary izany dia toetra tsy dia lehibe loatra Free Software.
Saingy ... mbola tokony hatao ...
Na dia manana fitaovana maimaimpoana aza ity endrika ity dia misy ny tsy fitovizan'ny encoder sy ny decoder: na dia mahomby sy tsara aza, ny encoder tsara indrindra dia ny «propriétaire» amidy miaraka amina serivisy mifototra amin'ity haitao ity, nataon'ny orinasa 'LizardTech Inc.', ary natao ho an'ny ny karazana fahazoan-dàlana -izay mahatonga azy ireo tsy hifanaraka- fa ity farany tsy tafiditra ao 'DjVuLibre '. Momba ny mpamily GhostScript manokana izy io 'GSDjVu', izay miasa ho famenon'ny 'DjVuDigital' (PostScript sy PDF mankany amin'ny mpanova ny rakitra DjVu). AT&T no namolavola ny mpamily, saingy tsy hay hazavaina fa nanome izany tamin'ny alàlan'ny 'Common Public License Version V1.0' (CPL), izay ataony tsy mifanaraka amin'ny resaka fizarana ambanin'ny 'GPL' (fahazoan-dàlana amin'ny sisa amin'ilay suite 'DjVuLibre').
Azonao atao ny mifandray amin'ny 'AT&T Intellectual Property Licensing organisation' (licensing@att.com), ankoatran'ny fisaorana azy ireo noho ny fahazoan'izy ireo ny kaody, mangataka azy ireo hamoaka izany eo ambanin'ny 'GPL' (na mifanaraka), ka mety amin'ny fizarana indray . Ny ady hevitra misy fanazavana feno sy feno dia azo jerena ao amin'ny 'djvulibre.djvuzone.org'.
Misy iray fanoloana tsara ny endrika fisie 'PDF', na noho ny filozofika amin'ny fampiasana Free Software and Technologies; na -tsy misy fanampiny-, ho an'ny fampisehoana fotsiny ary tsy misy fatiantoka kalitao, amin'ny ankapobeny dia mahazo azy io: ny endrika sahaza azy dia 'DjVu'.
Mora ny fampiharana azy, afaka misafidy plug-in tsotra, mpamaky rakitra efa mampiditra ny fidirana amin'ireo endrika ireo ('evince', ao amin'ny Gnome, ohatra), na mametaka andiana fitaovana madinidinika raha ny tianao miasa miaraka / aminy, ary ho azy ireo tsy misy tsara noho izy ireo 'DjVuLibre'. Raha mila mitazona na mifindra antontan-taratasy manokana ianao dia afaka misafidy mpanova amin'ny Internet toa 'Any2DjVu'.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Tsy azo antoka ny antontan-taratasy PDF
Fampitahana ireo mpizaha Internet amin'ny Linux